Ajụjụ General - ShenZhen KAISHENG PCB CO., LTD
PCB Manufacturing Ajụjụ:
Gịnị ka PCBFuture na-eme?
PCBFuture bụ onye ọrụ aka ọkachamara nke ụwa na-enye PCB ationgha, nzukọ PCB na ọrụ ndị na-eme ka ndị ọzọ.
Kedu ụdị bọọdụ PCB ị na-arụpụta?
PCBFuture nwere ike ịmepụta ọtụtụ ụdị PCB dị ka otu / PCB kwadoro, PCB na-agbanwe agbanwe, PCBs siri ike, PCBs na-agbanwe agbanwe na PCBs na-agbanwe agbanwe.
You nwere opekempe iji ibu (MOQ) maka PCB iwu?
No, anyị MOQ maka PCB mmepụta bụ 1 mpempe.
You na-enye Sample PCB n'efu?
Ee, anyị na-enye Free PCB samples, na qty abụghị ihe karịrị 5 PC. Ma anyị kwesịrị ibuana n'omume mbụ, na weghachi PCB sample eri gị uka mmepụta ma ọ bụrụ na gị sample iji uru bụghị karịa uka mmepụta uru si 1% (Ọ bụghị gụnyere ibu).
Kedụ ka m ga-esi nweta ọnụego ngwangwa?
Nwere ike izipu faịlụ ndị ahụ na email anyị ahịa @ pcbfuture maka nkwupụta, anyị nwere ike ịgụta gị na awa 12 na-ejikarị, ọsọ nwere ike ịbụ 30 mins.
Enwere m ike ịmepụta bọọdụ m na mbadamba?
Ee, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na otu PCB faịlụ na rụpụta mbadamba na ogwe.
Enwere m ike itinye ebe PCB na-adịghị?
Ee, anyị nwere ike na-enye na PCB n'ichepụta ọrụ ahịa anyị.
Kedu ihe kpatara ị jiri eji arụ ọrụ ntanetị
PCB online see okwu na-arụ ọrụ maka ike ike price na-edu ndú oge, anyị ịkọcha na elu àgwà PCB mmepụta, otú zuru ezu DFM ego na izi ezi dị mkpa. Anyị na-esi ọnwụ na Nchikota igwe na ọrụ aka iji belata ihe ize ndụ ndị ahịa.
Olee otú gụọ ụzọ oge nke PCB mmepụta?
PCB iji ndu oge ga - aguta mgbe EQs nile nke PCB gha edozi. Maka iwu ịgbanwere iwu, gụọnụ ụbọchị ọrụ ọzọ dị ka ụbọchị mbụ.
Have nwere DFM na-elele maka imepụta anyị?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ DFM n'efu maka iwu niile.
Turnkey PCB nzukọ Ajụjụ:
You na-enye ngosipụta PCB prototype (obere olu)?
Ee, anyị nwere ike inye na turnkey PCB nzukọ prototype ọrụ na anyị MOQ bụ 1 mpempe.
Gịnị faịlụ dị gị mkpa maka PCB nzukọ iwu?
Nọmalị, anyị nwere ike ịkọ ọnụahịa gị dabere na faịlụ Gerber na ndepụta BOM. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, Họrọ ma debe faịlụ, ịbịaru mgbakọ, ihe achọrọ pụrụ iche na ntuziaka ka mma iji nyere anyị aka.
You na-enye free prototype PCB nzukọ ọrụ?
Ee, anyị na-enye free PCoty prototype nzukọ ọrụ, na qty bụ ihe karịrị 3 PC. Ma anyị kwesịrị ibuana n'omume mbụ, na weghachi PCB sample eri gị uka mmepụta ma ọ bụrụ na gị sample iji uru bụghị karịa uka mmepụta uru si 1% (Ọ bụghị gụnyere ibu).
Gịnị bụ Họrọ na Ebe faịlụ (Centroid faịlụ)?
bulie ma debe faịlụ a na-akpọ ya faịlụ Centroid. Enwere ike ịgụ data a, gụnyere X, Y, ntụgharị, akụkụ nke mbadamba (n'akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ ala) na onye nrụpụta nrụtụ aka SMT ma ọ bụ igwe mgbakọ mgbakọ.
You na-enye turnkey PCB nzukọ ọrụ?
Ee, anyị na-enye ọrụ nlekọta PCB, nke gụnyere ntinye mbadamba Circuit, Comprehensive Sourcing, Stencil, na PCB Population na nnwale.
Kedu ihe kpatara ụfọdụ ego eji akwụ ụgwọ sitere n'aka gị dị elu karịa ndị a ma ọ bụrụ na ịzụta n'aka anyị?
Ihe eletrikiiki ebubatara na China ga-agbakwunye 13% VAT na ụfọdụ n'ime ha ga-ebubo Tarifu, nke dị iche na koodu HS nke akụkụ ọ bụla.
Kedu ihe kpatara ụfọdụ ego eji akwụ ụgwọ sitere n'aka gị dị ala karịa ọnụahịa nke na-egosi na weebụsaịtị ndị nkesa?
Anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ wrold ama nkesa dị ka Digi-Key, useké, Arrow na wdg, ebe anyị nnukwu kwa afọ zuo ego, ha na-enye anyị ọtụtụ ala ego.
Ogologo oge ole ka ịchọrọ ikwuputa ọrụ Turnkey PCB?
Ohaneze ọ na-ewe 1-2 ụbọchị ọrụ iji kwupụta ọrụ ọgbakọ. Ọ bụrụ na ịnabataghị ihe anyị kwuru, ị nwere ike ịlele igbe email gị na folda jun maka ozi email ọ bụla zitere anyị. Ọ bụrụ na ọ nweghị ozi ịntanetị anyị zitere, biko kpọtụrụ abụọ sales@pcbfuture.com maka enyemaka.
You nwere ike ijighi ogo akụrụngwa maka PCB anyị?
Site na ahụmịhe afọ, PCBFuture wuru ọwa mmiri nwere ntụkwasị obi yana ndị nkesa ma ọ bụ ndị nrụpụta amaara ama nke ụwa. Anyị nwere ike inweta nkwado kachasị mma na ọnụahịa dị mma n'aka ha. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị nwere àgwà akara otu inyocha ma nyochaa àgwà nke components. I nwere ike zuru ike n'ihi na àgwà nke mmiri.
Enwere m ike ịnweta akaụntụ ego kredit?
Maka ndị ahịa na-adịte aka ndị na-akwado anyị ihe karịrị ọnwa isii yana ọtụtụ iwu kwa ọnwa, anyị na-enye akaụntụ nnabata na usoro ịkwụ ụgwọ ụbọchị 30. Maka nkọwa ndị ọzọ na nkwenye, biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-alaghachikwute gị ngwa ngwa.